Diina nama tufatutti firomu yaalun caalaa of tufachisudha.
Ibsa GPO/OPC 28/02/2015
Wayyanen quuftee haasaa walalte Uummataa Oromoo irratti balaqamuu egaltee jirti. Kitaba Bu”aa ba’ii qabsoo Uummataa Oromoo Siirna garbumma irraa gara bilisummaatti jeedhu kutaa 2faa keessatti wayyaneetti firomuu utuu hin tane hidan buqisaan Oromiyya bilisoomsuu qoofa ta’uu isaa bakka Wayyaanee aanggoo irraa buqisuuf furmaatni isaa maali? jeedhu fula 353-380 irra ni argatuu. Kana malee daraggagoon Oromoo qeeroon siirna kana yeroon uummataa Oromoo irra buqisuuf waan isaan goochuu qaban tokko tokkon Kitabuma kana Kuta 2faa 592-679 balinan waan ibsameef dubsuu dandeesu. Qoorannoo kitaba kana fi qoorannon Adda Addaa goodhamee fi qooratama jiru akka ibsuti, Siirni Habasha kammiyuu sabni Oromoo jirachuu akka hin qabnee erga ibsee booda Habashaa waliin Hariiroo uumatani Mirga Oromoo egsisuu akka hin dandeenye ifaatti ibsun falma hadhoftuu goochuun murtesa ta’uu agarsisa.
Oromoon waan beekuu qabu qabsoo kessatti waregamii ni mudata Oromoo waregama barbaachise hunda kafalee bilisumma argachuu qaba. Uummatii Oromoo jirenya gadadoo fi gadii anten tufatamee jiratuu dhisati warii jirenyii isaan nu caalaa foya’aa ta’ee iyuu biyya isaanif, enyuuma isaanif jeecha Libya, Yeman, Sriya fi Iraqi keessatti guyyadhan lubu 100 oltuu waregama ola. Kashalaben akka Abbayii Tsehayee faa “liki inasgachewalen” qoriicha keessan isiinf qoona jeete Oromooti dhadatee lubun jiratee Oromoon tufatamee Tigire jalati bulun jireenya miti. Kun dadhabina fi badii dhabbilee Oromoo qoofa utuu hin tane Uummatii Oromoo akka Uummatati iyuu kana caalisee ilaalun heeduu nama gadisisa.
Yeroo diini siiti dhadatuu yoo itti deemtee malee boodeti deemun harka lachuu dha. Wayyane/TPLF fi Sareen tokko yoo sodatani baqatan nama duukati hin haafttu, yoo itti qajeelte ammoo sii dura hin dhabbatuu. Waan Oromummaa keenyatti nugadisisee yoo jiratee miseensoota OPDO onnee ittin Abayi Tsehaye fula dura dhabani ittin falmatan dhabuu isaanti. Utuu nu ijoole Oromootu dubatee ta'ee yoona waan bayee dubatu turan. OPDOn angoo fi minda argateen ittin midhan nyachuu malee wa’een midha Oromoo fi Tufiin isaan mataa isaan irratti TPLF geggesituu isaanti hin dhaga’amuu? Jeechi Abbayi Tsehayee attamiti isaan obsisisee lataa? Akka Dhaabaa isaantti akka koreetti maliif kun ta’ee jeedhani irratti mariataniruu lataa? Jeecha kana booda Uummatatti gadii ba’aani nu filadha jeedhan dubachuu ni danda’uu hin qaneefatan lata? Nuuti idoo isaan waan salfaneef mee erga keenya kana booda ilee ibsa mormii tokkon Uummatichatti gadii ba’uu ykn EPRDF keessa ni ba’uu jene yaadna. Kun ta’uu bana hundi isaan akkuma nama tokkotti Angoo gadi dhisu qabu.
Rakko Jiru Uummata sodatani ykn salfatani irra dhoksun bala qaba, haqa jiru waltii himani wal siirefatani wal duka luca’an qabsa’uun barbaachiisadha. Namoon Heedun yeroo wa’ee Ammanta Uummataa gorsuu yaaluu wa’ee ammanta dubachun bala guda qaba ykn basii guda nama basisa jeedhu, kaanfu haayuulee Oromoo heedun wa’ee Ammanta dubachuu ykn bareesuu ni sodatu, yeroo uummati keenya dogoggooru fi kara hin malee irra deemuu waan beeknu gorsun ijoole uummaticha bala irra hambisuuf malee bu’aa adda waan arganuu hin jiru ykn ammoo ammanta midhuuf miti, ykn ammoo ammanta isaa bira deggeruuf miti. Ijoolen Oromoo lafa abba isheetiif qabsa’uu dhifte sriya akka deemtuu hin barbaadu. Dhaabilee Oromoo utuu ilaaluu yeroo kiyyoo diina seenan califnee hin ilaalu. Rakkon keenya malii?
Ijarsa Cimmaa hin qabnuu ijaramuu qabna. Akka dhabbati qoofa utuu hin tane akka siirna gadaatii iyuu akka umurii keenya akka ganda keenyatti Nama 3 yoo bayatee nama 5 ijaramnee diina falmachuu qabna, utuu diini quufee ta’uu nu agabuu buluu hin qabnuu diina irra fudhnee nyachuuf ijaramuu qabna, utuu Tigiren Maallaaqa lafa keesuu dhabdee Warqee mila Hanga Rifeensa mataati naqatee yaatuu Oromoon biyya baqatee Galana Mederterani fi India keessatti dhumuu hin qabu, ykn Onnge Sudan-Libya fi Sanai keessatu bube fi dhukeen dhumuu hin qabu. Bu’aa Ba’ii Qabsoo Bilisummaa Oromoo Fulaa 590
Tika cimmaa fi Icciti eguu dhabuu rakko Oromoo isaa gudadha. Ijarama yeroo jeenu miseensa dhaaba heedu horachuu utuu hin tanee dhabba sun fi miseensa dhabba sun kan tiksuuf kan to’aatuu dame tika cimmaa dhabuun diirqama. Sawii ilee tikee qaba, baratoota kutaa keessatti barsisatuu tiksa, Miseensaa Paarlamaa ilee Affan Ya’ii fi ittigaafatamtoota dame adda addaa tuu tiksa. WFDO miseensaa 100, 000 qabuu keessa 20,000 ogumma tika akka argatan fi dargaggoota leenjjisuu egalee ture, wayyaneen dafte achii utuu nu hin baleesin. Dhaabilee Oromoo hundan hanqiini keessan tika cimmaa hin qabdan jeene yeroo qeeqnu ykn goorsinu ni dalanuu, Qooranno hojji Tikaf qoopha’ee ilee biyya ala fi biyya keessati rabsamee ilee nami dubsee hin jiru. TPLF Nama 5n 5nin yeroo Uummataa gurmesitu oganna 1 fi Tika 1 itti ramadi kun jeechun Oganan sun fi tiki 1 sun 2 ta’aan wara hafan 3 tiksuu jechudha. GDWBO dame dargaggoota wayyanee Oromiyya irra buqisuuf miseensa dargaggoota 100 keessatti tika 25 qabachuu dirqama jeedhe amana. Bu’aa ba’ii qabsoo Bilisummaa Oromoo fula 636 ilala.
Tukkumma dhabuun keenya rakko gudadha. Dhaabilee siyaasa Oromoo ilee ta’ee sabi Oromoo diina isaa dura dhabachuu irratis ta’ee Oromummaa isaan waan hunda irra tokko ta’uu qaba. Qooratoon Seena, Hayyuleen siyaasa fi Mootummoon Europa fi Amerika kan nuun jeedhan Oromoon isiin tokkuma hin qabdan jeedhu. Kun hanga yoomiti itti fufa warii tokkuma kana hin barbanee wara Fayida barbaaduu ta’uu arga jira. Tokkumma dhabbun keenya ammoo diina dhifnee akka wal lolu nu goodhe jira. Waan, biran Hafee Amari, Tigre fi Shabiyan ilee wal ta’aan TPLF ballesuuf yeroo wal galan Oromoon ammoo Amanta fi Gandan wal qoode amma ilee caaraa Oromoof dhufa jiru kana diini akka itti fayadamuu goochuuf deemu. Ykn ammoo wareegamii akka bayatuu goodhu, nuu waan wada isiin galuu Bilmisummaan Oromoo akka hin hafne isini mirkaneessa garuu tokkuma dhabuun keenya wareegama gudaa dhiiga dhangala’u gudaa Oromoo gaafachuuf deema, malee hundi keenya Oromiyya irratti lolee dhumuuf qoophidha. TPLF, Shabia fi dhabbileen amhara ilee kana beekuu qabu.
Habashuma jala of bilisoommsuu dadhabu. Namni Oromiyaa keessatti dhalatee umuri isaa kanatti Afaan Oromoo hin dubanee mirga Oromoo kabajisuuf utuu hin tanee mirga Oromoo dhichisuuf kan qoopha’edha. Goobana Daceet kasee wara Oromoon gudusee fi wara maqaa Oromoo qabantuu Oromoo ajjeesisa ture, Makoo, Diqala, Jaldhufa, Amachisa fi Gudifachan Qabsoo Oromoo fi Oromiyya keessati akka bakka hin qabanee Oromoon hundi qabsa'uu qaba, OPDO yoo ilaltan koree hojji raawwachiftu OPDO 95% Oromoo miti, Koree gidugalessa ilee harki 50% Oromoo miti. Oromoon ammale walda amantati sagadutu jira, amalee Oromoo Afaan Amhara qoofan baressuu fi dubatutu jira, amalee Oromoo Habashaa fudhutu jira. Amalee Habasha jala adeeme Oduu Oromoo kan itti himutu jira. Jara kana utuu hin bilisoommsiin biyya bilisomsun rakko dha. Uummataa keenya Amala waaraaqa barsiisu qabna, Amanta waaqeefanna cimsuu qabna, Amanta biran inni kan gara Arabaati Oromoo harkisa inni kan Ortodoksii janjoftuu nu janjeessa fi harka qurcii nu dhungachisa turtetti nu harkisa. Waaqeefataan diinati ofi harkisuu hin jiru. Habshoon ilee waqeefatatadha ati jeenan lamaffaa siiti hin dhiyatan. Oromummaa cimsuun Habashumaa irra of bilisoommsun maatii of bilisoommsun dirqama. Utuu of hin bilisoommsiin Oromiyaan bilisoommsa jeechun of sobudha.
Diina nu baleesuuf deemuu waliin hariro Uummachuun of salphisudha. lammii of irra fi maatii of irra qoofa ba’aani, ykn Oromoo waliin qabsa’uu dhisaani diina waliin tokkuman qabsa’uu yaalun bala qaba. Rakko OPDO nu irra ga’ee irra barachuu dhabuun garii miti. Ijoolee OPDO keessa ba’aan yeroo yeroo murasa ABO bira turan ABO waliin hojeechuu dadhabnee jeedhan Jijjirama Jeechun Ginbot 7 waliin yeroo ijaraman Oromoo hundi akka isaan irra garagaluu tilmamuu dadhaban, Habashaan Oromoof fira ta’ee hin beeku, Oromoof kabaja hin qabu. Habashan Oromoo dhigga dhangalasee ittin bashanan ture fi ammalee yaaki sun siiri dha jeedhan wara amanan waliin hojeechun lamii of gurgurudha. Oromoo ta'aan Tigire fi Amhara waliin qabsa'uun attamti danda’ama?, namni garaa attamii qaba lata, kan lamii isaa irra horma firaa goodhatee Uummataa isaa diinatti gurguruu? Wayyanneen wara garaaf bule dhaabbilee Oromoo kessatti ijaaruuf irratti hojeecha jirti. Diini ODF keessatti ilee akka OPDO keessatti of ijaruuf qoophi dha Oromoon mana isaa bane nama keessa gulufsisuu amala goodhatee jira Makko, Jaldhufi, Gudifacha fi Amachisan ammoo Oromoo fi Oromumaa baleesiti.
Amanta Ergisaa leelisuun Oromoof bala gudaa qaba. Shamaran Oromoo Araba Gurachaa of goote fulatii waan guracha xaxachuun Oromoo fi Oromummaa keessatti waan baratamee miti, Ethiopia keessatu bara jireenya keenya gutuu kana hin arginee kun rakko miti jeene yoo hara birra dabaree bori nu dhiba. Oromoon biyya isaa irratti mirga dhabee Ajeefama, biyya Ari’atama, hidhama fi dararama utuu jiru rakkon kun itti mulatee Oromof qabsa’uu dhisee islammuma jeecha Sriya fi Somalia keessatti kan amantafin qabsa’aa jeedhu Oromoo ta’uu hin danda’uu Ala ykn Rabii lafa kee enyuuma keeti yoo manati siiti dhufan of irratti falmadhuu jeedha malee biyya horma deemi nama ajeesii hin jeedhu. Dargaggoon Oromoo haqa beeku qabdan isiiniti himuu barbaana, Arabi Jiba gudaa nu irra qabdi, kabaja tokko ilee saba keenyaf hin qabdu, lafa dhiyoo kana ilee Sauid Arabiya, Yemen, Libannos, Kuwate, Liba kkf keessatti yaakka ilman Oromoo keesuma shamaran Oromoo irratti raawwatamee kan obsa namaf keenuu miti. Namoon kun wara Hadha mana isaan bassan kara irratti qalani dha. Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessattis biyoon Arba badii gudaa unni irratti dalaga turan. Biyoon arba fi Biyyi Musilima hundi Yeroo Shabiya fi Wayyanee degera turan Qabsoo Oromoo ammoo dura dhabacha turan. Oromoo harki caalaan keenya Musilima ta’uu utuu beekan duri Nugusi Oromoo Abban Jifarii Saudi Arabiya garggara turu utuu beekan, Namni Makaa adeemuu ilee Badhasaa fi Mallaaqa garggarsa fudheef akka adeemuu utuu beekan hara TPLF fi Shabiya garggaran nu midha turan nu midha jiru. Kara biraa ammoo Habashoon Kirstiyana Oromoo kan tanee hindi keenya Akirarii Musilima nuun jeedhan Videon dirama nu irratti hojeetan you tube keessatti rabsun nu yaakaa jiru. Kanaafuu Oromoon waan hin beekne keessa lixee araba of goochuu irra of qusachuu qaba. Oromoon Obboloon keenya Amanta isilama isuuma duri beeknu fi waliin jiranee waliin Oromummaf qabsoofne sana qabatani ykn amnteefacha abba biyyumaa Oromoo fi Oromiyaaf qabsa’uu malee biyya hin bekneef deemani nama ajeesan du’uun cubuu cimmadha wal gorfachuu qabna.
Sodachuu fi of irratti loluu hanqachu. Yeroo diini lafa keenya samuu dargaggoon Oromoo nannoo sun jiru wal gurmeese mana fi waarshoota ijjaraman hunda gubee barbaadeesu qaba malee diinaf qacaramee dhaga bachuufi hin qabu. Uummani Ambo, Gimbii, Naqamte, Danbi Dolo, Balee, Jimma falma fi mormii Master Plan Finfinnee irratti lubu isaa wareege diina gubee yeroo ofi gubuu uummani Oromoo naannoo Finfinne ammoo cisee dhageefachuun mal irra made? Ykn ammoo hanga ABOn tanki fidufti egachuu hin qabuu Abdi iyuu tank caalaa waan Tigren ijjartee hunda guyya tokkotti Oromiyya gutuu keessatti gubun ni danda’ama. Tigiren yeroo Barata Oromoo tokko ajeeftuu Tigree samuuf Oromiyaa keessa yaatuu irratti bakka hundatti tarkanfi fudhachuu dha. Diina irra bituu fi itti gurguru dhisuun, diina waan hunda qoqoba irratti goochuun dhiina of keessa basuun ni danda’ama Oromoon maliif yeroo hunda tarkanfi fudhachuu dadhaba.
Gandan wal ijaruu fi Gandan wal tumsun qabsoo keenya ajeesa. Waan arga jiru namni kan madalamuu fi dhadeefatamuu haqa hojeete utuu hin tanee deggersa gandi fi gosan wal jala shubsuu fi wal dhadeefachuun, kun ammoo Oromoo haqa fi Oromuummaf hojeetan kan midhuu fi hamilee cabsuu Haatuu fi sobduu bifa jijjiratee ol gadii katuuf ammoo caaraa gudadha, garuu dhugan ammoo ni turti malee hin dhokatuu, wari akka siyaasa Abba Mala (Brihanu Damte) geggesan ji’a tokko keessatti dhabba 3 keessa seenu, ykn ammoo guyyatti dhaabba wali moormuu 3 waliin hojeetan ni tura malee ni saxilamuu, Warii kun wara Bilisumma mirkanefaachuu barbaadan ykn Kayyoo sabaa jala adeeman utuu hin tanee wara Fayida dhunfa jala adeemanidha, gaafa Fiyida dhaban dhisani keessa adeemuu. Qabsoon Bilisumma Fayida dhunfa ykn Feedhi Angoo ittin argachuuf utuu hin tanee uummata waga 130 ol diina jala jiru Bilisommsuuf waan ta’ee Oromoon hundi waloon qabsoofnee waloon bilisaa ba’uu qabna.
Ayyanailalatuma fi Fayida jala deemuun amala waraaqaa fi qabsa’aa miti. Dhaabii Qabsoon Bilisummaa geggeseu akka dhaabilee Amerka fi Europa qabsa’ee nama barbaaduu sun angoo irra basuuf miti. Miseensoon dhabba Bilisumma keessati of gurmessan kan qabsa’aan angoo nama dhunfaf miti, ykn ofi angoo qabachuuf miti, ykn Maallaaqa ittin argaachuuf miti, ykn ittin beekamtii argaachuuf miti. Ykn ammoo Amanta saba tokko bakka qabsisuuf miti.Qabsa’aan qabsooti dabalamuu kana beekuu qaba. Qabsa’aan waaraaqa ta’uu qaba. Qabsa’aan Maallaaqa, Qabeenya, Maatii, Amanta fi Angoo hin qabu. Qabsa’aan ofuma isaaf iyuu kan uummataa isaati, Che Guveran biyya adda adda keessatti kan qabsa’aa turef Maallaaqa, Maatii, Angoo ykn Amanta argaachuuf miti. Bilisummaa uummatootaf. Fakeenya dhiyoo yoon isiin keenine Qabsa’aan ABOti dabalamuu tokko yeroo achii ga’uu qabeenya harka qabuu maallaaqa fi sa’ati harka isaati jirtu ilee of irra basee keena. Sababin isaa Qabsoo keessatti hundi wal qixee dha, qabeenyan kan dhunfa hin jiru, Waan qaban hundi kan walooti. Jaala qabsoo jeedhan kan wal irratti du’anfi kanaaf. Dhaabilee Bilisummaaf qabsa’an Miseensa isaan amala waaraaqa akka baratan qama isaan akka goodhatan barsiisuun dirqama.
Diina Amanu fi Murtee hadhooftu irra ga’uu dadhabuu. Hayuulee heedun waan nu gorsan diini keessan isiin nyachaa waan turef isiin dhabnan ni du’aa kanaafuu isiin nyacha jirachuu barbaada yoomi ilee bilisummaa keessan hin barbaaduu jeedhu, yeroo hunda Oromoo kana barsiisa ture barsiisaa jiras. Gobna Dacee, Fetewurary Habte Gorgis Dinagide, Abba Aragayi, Balcha Abba Nabsoo, Abdisa Aga, Dr. Haile Fida, Dr. Mokonin Jotee, J/Damise Bulto, J/ Marid Nugusee, J/Mulugeta Buli, J/Tefari Banti, Mitiku Tarfasa, Hailu Garbaba, J/Ragasa Jima, Dr. Nagaso Gidada, kkf hundi Habaasha Amanan waliin baaburaa yabatani irra nagaan hin bunee, OPDOn ilee caaran ishee kana. Dhaabilee fi namoon tokko tokko ammoo Habaasha waliin hojeene Habaasha irra bilisa bana jeedhu kun ammoo nama hin galuu. Namaa irratti qabsooftu waliin attamiti waliin qabsoofta ykn waliin hojeeta? Kunimmoo dhabbaa jijjirama jedhu irratti callaqisaa. Kan birra ammoo dogoggoora darbee irra barachuu hin dadhabudha. Filannoo bara 2005 hamaa akka ta’ee fi booda irra deebi’ani akka sagalee saman utuu beeknu, nama filatamee kani ajeesan, kani hidhan kani biyaa ari’atan. Filannoon Ethiopia keessatti jijjirama hin fiduu utuu jeenu kun oduu baqatoota diasporatti jeedhamee bara 2010 filannoo soba wayyanee seenan, filannoo sun keessati Oromoon tokko ilee hin filatamin hafee. Oromoo Wayyanee jaalatee miti, Wayyaneen caaraa Uummataaf hin lanee barana ilee uummataaf caaraa hin latuu. Kanafuu dhaabilee mormiitoota filannoo kana amanani humna nama, maallaaqa fi wareegama lubu kafaluu irra filannicha sababeefachuun fiincila diida garbumaa qeeroon geggesa jiru irratti hirmachuun barbaachisadha. Kara birra ammoo Mootummaan kun ofuma isaaf iyuu kufuu waan ga’eef haala hamaa ykn lola hamaa dhalachuu maluu keessatti dhiiga heedun utuu hin dhangalasiin Oromoo kara ittin abba biyya goonuu irratti ijjaramani walin mari’atan hojeechuun murteesa dha. Wayyaneen ni kufaa wayyanee kufisuuf jeequmsii fi loli hin oluu, lola fi jeequmsa kana keessatti hiriri fi hariroon dhabilee Oromoo cimma ta’uu murteessadha. Yoo dafnee utuu jeequmsi fi lol hin ka’iin wali galuu banee abba abban kara karaan yoo itti seene diina qoofa utuu hin tanee wal rukkutun ilee ni dhalata. Keesumaa Jarsoolin waggoota 40 ol qabsoo kana keessa turtan amma ilee dogoggoora keessa nu galchitan Oromoo dhigga akka wali hin dhangalasifnee of egachuu qabdu. Kun ta’uu banan bala Uumammuu hundatti isiintu dura gaafatamuuf deema. Dogoggoora dadabalani rawwachun garii miti.
Biyya ala ta’an biyya keessatti miseensa qabsoof ijaruun dogoggoora. Gummi Paarlaamaa Oromoo Qoorannoo inni goodhe keessa tokko biyya alatti biyya keessatti miseensa horachuu ykn ijaruun bala adda adda qabachuu isaa hubachuun wari achi jiran akka wal beekan, wal amanan fi wal to’achuu danda’an wal ijaruu qabu. Sababin isaa diini madhee qabsoo keessatti akka of hin ijareef, namoon waliin qabsa’uuf wal filatan ilee wara siiriti wal amanan waan ta’uu maluufi, ala ta’aan biyya keessatti yeroo gurmessan email fi FB, kkf ergan darbuu diina harka seenuu waan maluuf namoon bakka jirenya isaanti namoota waliin jiratan qoofan 3 – 5 ta’uun wal ijaran diina dura dhabachuu qabu. Diina jeechun TPLF Nafxanya Hara Angoo irra jiru fi Nafxanya Mofa Siirna durii deebsuf deemu hunda lafa keenya irra akka hin dabaree goochu dha. Damee dargaggoota GPO/OPC (GDWBO) Qeeroo Bilisumma waliin qabsoo fininsuu qabu, fafacanee deemuun diinaf saxilamudha yeroo hunda tokkummaf fakeenya ta’uu qabna. Dargaggooti Oromoo WFDO fi OBK akka tokko goodhan waan hunda akkas hojeechun fakeenya ta’uu qabna.
Yaadii Furmataa malii?
Wareegami ilee kafalalamee garuu qabsoo Oromoo harka Habashaati akka hin kufineef waan feedhee irratti Oromoon wal dura dhabachuu hin qabu;
Warii Qabsoo biyya keessa kara nagaa adeemsiftan OPDO dabalatee gaafa guyyan dhumaa geese Fayida fi Angoo utuu hin mararsifatiin Bilisumma Oromoo fi Abba Biyyumaa Oromoo mirkanesuuf wal duka luca’uu qabduu;
Dhaabilee kara laga biyya seenuu qaban hundi adda tokko jalatti qama tokko ta’ani Bilisummaa fi Abba Biyuuma Kayyoo goodhatan lammii salphina basuuf humna tokko ta’aan qabsoo biyya galchun Bilisumma labsuu;
Dhaabileen biyya kessa fi biyya ala guyaa dhumma, gaafa xiiqi sun qunammiti cimaa qabachuuf ammuma harka lafa jalan nagaa wal gafachuu;
Qeeroon Bilisummaa Oromoo Afaan Oromoon sii barsisan Afaan hojii biyoolesa ammoo Afaan Amhara qoofa goodhan akka atii Federala galtee hin hojeenef murte du’aa siti murtesan sun du’aa jala of basuuf hunda caalaa qabsa’uu qabda Afaan Oromoo utuu Masara Mootumma hin galchin rafuu hin qabduu. Duteta du’aan waan sodatuu hin qabuu.
Waraani, Polissi fi Miseensii tika biyyatti kan lamii Oromoo ta’aan gaafa guyyaan geese Nafxanya mofa fi Nafxanya haraati qawee isaan galagalchachuuf ammuma samuu isaan amansisuu qabu.
Hojeetan mootummaa, Daldala fi Qoote bulan Oromoo garbumaa bara dheera kana jala ba’uuf wareegama barbaachisuuf kafalee abba biyya ta’uuf of qoophesuu qaba malee bara baran yeroo diini ijoolee isaa ajeesuu boo’uu hin qabu.
Bartoon ijoole Oromoo fincila Dida Garbuma kana keessatti University irra hanga sadarka tokkoffaati qindomina yeroo tokko socho’uu qabu male, wal busan yeroo adda adda bakka adda addatti goodhamuu hin qabu. Bakka hundatti yeroo tokko yamu ta’uu humni diina ni faca’aa, diggersi uummataa ilee ni cimaa.
Diaspora ilee akkuma bara 2014 hirira cimaa goochun tokkumman Qeeroo Oromoo deggera ture kana booda ammoo Hirira ba’uun sagalee ta’uuf, Maallaaqa garggaruu, Bareefama fi gorsan garggaruu, media hunda Website, Paltak, FB, kkf Media uummataa hundan garggaruu, hayama fudhachun biyya galun gorsa fi deggersa qaman goochuuf.
Hidhamtoota, qaama Midhamtoota fi madoo garggaruu Qabsoon akka itti fufu fi qabsa’oon abdi akka hin kutanee goochuun dirqama. Sababi isaa Qabsa’oon gara biran akka qabsooti dabalaman goodha. Maatii qabsa’oota gaafachuu guyaa ayyana mana isaati qoophesuun ykn mana ofiti waamun akka qoofuman itti hin dhaga’amnee goochuu ijoolen isaa akka hin daree goochu. Dhimma kana ilaalchsee bara 2012-2014 akkuma uummataa Oromooti dhamacha ture, Hojii ijarsaa heedu akka hojeechuu qabnuu, isaan keessa Namoota hidhaman fi maatii isaan kan garggaruu waldan deggersa hidhamtoota, Qeeroo Baratoota Oromoo qamii garggaruu adunya irratti akka dhabatuu, baqtoota Oromoo biyya hunda keessatti rakacha jiran qami garggaruu ijaramuu akka qabu, Yakka dugugaa sanyii wayyaneen rawwatuu qamii qoratee ICC dhiyesuu akka dhabatuu; Mootummaa Oromiyya ijaramuuf damee qorannoo adeemisisu akka dhabatuu kkf yaada fi propsala hunda dhiyesne jira. Hanga tokko ilee irratti hojeeta jira. Jarsooli Oromoo fi Haayuuleen Oromoo waan akkasi hojeechuu irratti ga’e guda akka isiin irra egamuu irra deebine dhamachuu feena walumagalatti Oromoon hundi labsii duguggaa sanyii ballesuu sirni wayyannee fi aanga’ooti isaa akka Abbayyi Tsehayee faa ifaatti Oromoo irratti labsan kana buuqisuun mana murtii dhaabuuf tokkuumaan lamii keenya bira dhaabannee akka qabsoofnuuf waamichaa isiniif goona.